Etu ị ga-esi wuo mkpọsa nlọghachi maka ndị debanyere aha na-adịghị arụ ọrụ | Martech Zone
Etu ị ga-esi wuo Mgbasa Ozi Mgbakwunye maka ndị debanyere aha na-adịghị arụ ọrụ
Tọzdee, Febụwarị 11, 2016 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya anyị kesara ozi gbasara otu esi gbanwee uzo itinye aka na email gi, na ụfọdụ ọmụmụ ihe na ọnụ ọgụgụ banyere ihe enwere ike ime gbasara ha. Ihe omuma a sitere na ndi mọnk Email, Ozi ịntanetị ọzọ, na-ewe ya na ọkwa miri emi nke miri emi iji nye atụmatụ mkpọsa n'ezie maka ịgbanwere arụmọrụ arụmọrụ email gị.
Nchịkọta email nke mebiri site na 25% kwa afọ. Na, Dị ka a 2013 Marketing Sherpa akụkọ, 75% nke ndị debanyere aha email anaghị arụ ọrụ.
Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa na-elegharakarị akụkụ dị jụụ nke ndepụta email ha anya, ha na-eleghara nsonaazụ ya anya. Ọnụ aka dị ala na-afụ ụfụ ọnụego ọnyịnye ọnụego, na ozi ịntanetị a na-ejighi eji rụọ ọrụ nwere ike weghachite ya site na ISP iji tinye ọnyà ntọala iji chọpụta ndị spammers! Nke ahụ pụtara na ndị debanyere aha na-ehi ụra na-emetụta ma ndị debanyere aha gị na email na-ahụ ozi ịntanetị gị.
Tọ ntọala Mgbasa Ozi
nke ndị debanyere aha ndị na-emegheghị, pịa ma ọ bụ gbanwee site na listi email ị debanyere aha na afọ gara aga.
Emere nkwado adreesị email nke nke nke a ọrụ nkwenye email ziri ezi.
Send email doro anya ma dị nkenke na-arịọ ka onye debanyere aha ịbanye ọzọ na listi ahịa email gị. Jide n'aka ịkwalite uru nke ịnweta email gị.
chere izu abụọ ma tụọ nzaghachi nke email. Nke a bụ oge zuru ezu maka ndị mmadụ nọ ezumike ma ọ bụ na ọ dị mkpa ikpochapụ igbe mbata ha ma nye ohere maka ozi gị.
Sochie na ịdọ aka ná ntị nke abụọ na a ga-ewepụ onye debanyere aha email na nkwukọrịta ọzọ ọ gwụla ma ha họrọ ọzọ. Jide n'aka ịkwalite uru nke ịnweta nkwukọrịta email site na ụlọ ọrụ gị.
chere ọzọ izu abụọ na tụọ nzaghachi nke email. Nke a bụ oge zuru ezu maka ndị mmadụ nọ ezumike ma ọ bụ na ọ dị mkpa ikpochapụ igbe mbata ha ma nye ohere maka ozi gị.
Sochie nwere ozi ikpeazụ na ewepụrụ onye debanyere aha email na nkwukọrịta ọzọ ọ gwụla ma ha họrọ ọzọ. Jide n'aka ịkwalite uru nke ịnweta nkwukọrịta email site na ụlọ ọrụ gị.
Azịza ịbanye na ịbanye kwesịrị ikele ma ị nwedịrị ike ịrịọ ha maka ozi maka ihe ga-eme ka ha tinyekwuo aka na akara gị.
Na-adịghị arụ ọrụ Ekwesịrị ịwepụ ndị debanyere aha gị na ndepụta gị. Agbanyeghị, ị nwere ike chọọ ịkwaga ha na mkpọsa iweghachi na mgbasa ozi mgbasa ozi, ma ọ bụ mkpọsa ahịa ahịa iji merie ha!
Ihe omuma ndi sitere na ndi monks Email na enye kwa ufodu uzo di nma iji mee ka o nwekwuo ohere ime ka ndi debanyere aha gi ghara itinye aka:
Tags: ozi infographicemail ndepụta attritionemail ndepụta ire ereemail ndepụta njigidendị mọnk emailnbanye emailemail optin mkpọsaemail debanyere aha re-itinye akaemailmonksotúimeghari ozore-njikọ aka ọzọ
Yoast SEO: Canonical URLs na saịtị na Nhọrọ SSL
Etu esi eji ọnụahịa algorithmic mee ka uru dịkwuo elu